Ahoana ny fametrahana ny lalao SuperTuxKart amin'ny Ubuntu sy ny derivatives-ny? | Ubunlog
Ahoana ny fametrahana ny lalao SuperTuxKart amin'ny Ubuntu sy ny derivatives-ny?
SuperTuxKart dia lalao fifaninanana arcade 3D malaza amin'ny Linux natao ho an'ny rafitra miasa Linux.
Na dia izany aza lalao multiplatform, satria manana fanohanana amin'ny Linux, Windows, Mac ary Android izy. SuperTuxKart dia mitovy amin'ny lalao Mario Car ary loharano malalaka sy maimaim-poana.
Ny dikan'ny Navoaka tamin'ny herintaona ny SuperTuxKart 0.9.3, marimarina kokoa tamin'ny Novambra 2017 ary nanjary nalaza nanomboka teo.
Izy io dia miaraka amina endri-tsoratra avy amina tetikasa loharano misokatra isan-karazany, anisan'izany ireo hazakazaka isan-karazany. Ankehitriny dia mpilalao tokana na lalao multiplayer eo an-toerana izy io.
Na izany aza, ny kinova an-tserasera ahafahan'ny mpilalao marobe milalao dia mbola eo an-dàlana.
Ny fandraisam-peo dia natsangana tao amin'ny lalao izay afaka mamonjy ny video MJPEG, VP8, VP9 na H.264 miaraka amin'ny audio Ogg.
Ny kinova dia misy làlana vaovao maro, maodely sy endrika samihafa. Ao amin'ity kinova efa misy ity dia misy làlana napetraka ao amin'ny saha antsoina hoe "Cornfield Crossing", lalana amin'ny alina any amin'ny iray amin'ireo tanàna eropeana antsoina hoe "tanàna Candela", ary toeram-piadiana vaovao antsoina hoe "Estadio Las Dunas". Ny ankamaroan'ny lalamby dia misy ho an'ny rehetra.
1 Ahoana ny fametrahana SuperTuxKart amin'ny Ubuntu 18.10 sy ny derivatives?
1.1 Fametrahana ny SuperTuxKart
2 Ahoana ny fanesorana ny SuperTuxKart amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ahoana ny fametrahana SuperTuxKart amin'ny Ubuntu 18.10 sy ny derivatives?
Fepetran'ny fitaovana farafahakeliny
Alohan'ny hametrahana SuperTuxKart dia tsy maintsy ataonao izay hahazoana antoka fa mahafeno ny fepetra takian'ny lalao ianao.
Ny lalao dia manana fitakiana fitaovana kely indrindra, izay miampy ho an'ireo mpilalao te-hankafy lalao amin'ny teti-bola.
Ireto misy sasantsasany amin'ireo fepetra takiana amin'ny hardware izay tsy maintsy fenoinao alohan'ny hametrahana SuperTuxKart:
OpenGL 3.1 mifanaraka amin'ny GPU
600 MB habaka kapila mafy tsy misy
1 GB fahatsiarovana
Adaptatera sary farafaharatsiny 1GB VRAM
Fametrahana ny SuperTuxKart
Ny fametrahana SuperTuxCart dia mora ary tsy mitaky fiatrehana zavatra be loatra. Ho an'ireo liana afaka mahazo an'ity lalao tena tsara ity dia mila manaraka fotsiny ny fomba fanao omena azy ireo hametrahana ity lalao ity amin'ny Ubuntu sy ny vokariny izy ireo.
Raha mampiasa Ubuntu 18.04 LTS ianao na ambany ho an'ity fizotrany ity dia ampidirinay ao amin'ny rafitry ny rafitrao ny SuperTuxKart Personal Package Archive (PPA).
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manokatra terminal misy (Ctrl + alt + t) izy ireo ary tsy maintsy manoratra ireo baiko voalaza etsy ambany. izany
Mandritra ny pHo an'ireo mpampiasa Ubuntu 18.10 sy nalaina tamin'ity kinova ity dia azonay atao ny manery ity tahiry ity hampiasaina. Io ihany no mila manitsy ny lisitry ny loharano.list
Avy eo dia manoratra izahay:
Y farany manafatra ny lakilem-bahoaka izahay amin'ny:
Vantany vao vita izany dia tsy maintsy manavao ny lisitry ny fonosana sy tahiry fotsiny isika izao:
Ary farany manohy mametraka ny rindranasa izahay amin'ny:
ankehitriny raha sendra misy lesoka amin'ny repository ianao (Ubuntu 18.10) dia azonao atao ny misintona ny fonosana deb ho an'ny rafitra 64-bit miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Si Ireo mpampiasa rafitra 32-bit dia ireo fonosana izay tsy maintsy ampidinin'izy ireo dia:
Ary farany ho an'ny mpampiasa ny rafitra ARM (Raspberry Pi) ny fonosana ho an'ny maritrano dia ireto:
Ataovy ny fampidinana ireo fonosana, arakaraka ny maritrano ny rafitrao, afaka miroso amin'ny fametrahana azy ireo amin'ny mpitantana fonosana ankafizinay izahay na avy amin'ny terminal miaraka amin'ny:
Ary mamaha ny fiankinan-doha amin'ny:
Ahoana ny fanesorana ny SuperTuxKart amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Raha te-hanala ity lalao ity ianao satria tsy izany no antenainao na noho ny antony. Raha te-hanaisotra na manaisotra ny PPA amin'ny rafitra ianao dia sokafy fotsiny ny terminal ary manaova ity baiko manaraka ity:
Ary farany azontsika esorina ny rindranasa miaraka amin'ireo rakitra rehetra aterak'izany amin'ny:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Ahoana ny fametrahana ny lalao SuperTuxKart amin'ny Ubuntu sy ny derivatives-ny?
Ahoana ny fanovana ny tontolon'ny efijery GDM ao Ubuntu?
Slack: fitaovana fifandraisana ekipa tena tsara